နယ်ကျော် မွတ်စလင် ၇၈ ဦးကို ရခိုင်ပြည်နယ် ပြန်ပို့ | ဧရာဝတီ
စနေလင်း| November 9, 2012 | Hits:7,338
5 | | လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလက မြိတ်မြို့တွင် ဖမ်းဆီး အရေးယူ ခံခဲ့ရပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ပြန်ပို့မည့် မွတ်စလင်များကို ရန်ကုန် ကြယ်ငါးပွင့် ဆိပ်ကမ်းတွင် ယနေ့ နံနက်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နယ်ကျော်လာသည့် မွတ်စလင် ၇၈ ဦးကို ကော့သောင်းမြို့မှတဆင့် ၎င်းတို့ နေရပ်ဖြစ်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ပြန်ပို့ရန် အတွက် မြန်မာ့ ကြယ်ငါးပွင့် သင်္ဘော “တောင်ကြီး” ဖြင့် တင်ဆောင်လာရာ ယနေ့နံနက် ၉ နာရီကျော် အချိန်တွင် သာကေတ မြို့နယ် ကြယ်ငါးပွင့် ဆိပ်ကမ်းသို့ ဆိုက်ကပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ မွတ်စလင်များသည် ဇွန်လက စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခနှင့် ပတ်သက်ခြင်း မရှိကြောင်း၊ ယခုနှစ် မတ်လနှင့် ဧပြီလ တို့တွင် မြိတ်မြို့နယ် ကျောက်ဆူးအရပ်၌ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့က လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေအရ ပြစ်ဒဏ် ကျခံခဲ့ရသူများ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုလ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြစ်ဒဏ်မှ လွတ်မြောက် လာသောကြောင့် နေရပ်ရင်းသို့ ပြန်ပို့ရန် စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြိတ်မြို့နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
၎င်း ၇၈ ဦးသည် ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်၊ မြောက်ဦးနှင့် စစ်တွေဒေသတို့မှ ထွက်ပြေးလာကြသူများ ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်အခြေစိုက် ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ ကူညီနေသည့် အစ္စလမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့မှ ကိုကျော်နိုင်က ဆိုသည်။ အဆိုပါ အဖွဲ့သည် သင်္ဘောဖြင့် ပါလာသည့် ၇၈ ဦးကို စားရေးသောက်ရေးနှင့် အဝတ်အထည်များ သွားရောက်ကူညီလျက် ရှိသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ထွက်ပြေးလာသည့် မွတ်စလင် ၇၈ ဦးကို ပြည်မြို့သို့ အရင်ဦးစွာ ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ထိုမှတဆင့် ရခိုင်ပြည်နယ် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါကိစ္စကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေသော လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး တဦးက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့တာဝန်က ဒီကနေ ပြည်အထိပဲ တာဝန်ယူပေးရမှာ။ ပြည်ကနေ ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကို ပြန်ပို့ပေးဖို့ကတော့ ဟိုဘက်အပိုင်းက ဆက် တာဝန်ယူသွားပါ့မယ်။ ယခုလက်ရှိ အချိန်အထိတော့ သူတို့ ဘယ်လို ကော့သောင်းကနေ ပါလာတာလဲ ဆိုတာ ကျနော်တို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဟိုဘက်မှာ ဘယ်လို ဆက်လုပ်မယ် ဆိုတာလည်း မသိသေးပါဘူး” ဟု သူက ဆိုသည်။
ကြယ်ငါးပွင့်ဆိပ်ကမ်းသို့ ဆိုက်ရောက်လာသည့် ၇၈ ဦးသည် သဘောင်္ပေါ်တွင် ၃ ရက်ခန့် နေခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းတို့အတွက် အစားအသောက်နှင့် အဝတ်အထည် ကျပ် ၁၅ သိန်း တန်ဖိုးခန့် အစ္စလမ် ဘာသာရေးအဖွဲ့က ကူညီပေးနေကြောင်း သိရသည်။
“ကျနော်တို့ဆီကို လှမ်းပြောလို့ ကျနော်တို့က သူတို့ရဲ့ စားရေးသောက်ရေး အတွက် စိုးရိမ်လို့ အကူအညီလာပေး တာပါ။ ဘာမှတော့ တိတိကျကျ မသိရသေးဘူး” ဟု ကိုကျော်နိုင်က ပြောသည်။
မွတ်စလင် ၇၈ ဦးကို ရန်ကုန်မှတဆင့် ပြည်မြို့ရှိ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့ရုံး သို့ Asia Express အဝေးပြေးယာဉ်ဖြင့် တိုက်ရိုက် ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းအုပ်စုတွင် အသက် ၅၀ ၀န်းကျင်ရှိ အမျိုးသမီးတဦးနှင့် အသက် ၃၀ ၀န်းကျင်ရှိ အမျိုးသမီးတဦး ပါဝင်ကြောင်း၊ ကျန်ရှိသော အမျိုးသာ ၇၆ ဦးသည် လူလတ်ပိုင်းများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ၎င်းတို့ လုံခြုံရေးအဖြစ် လိုက်ပါဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပြီး ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်လည်း သာကေတ ကြယ်ငါးပွင့် သဘောင်္ဆိပ်ကမ်းတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အင်အား ၃၀ ကျော်နှင့် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် အင်အား ၂၀ တို့က စောင့်ကြပ်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။
ရခိုင်ဒေသရှိ ကလေးငယ်များ ပညာရေးအတွက် စိုးရိမ်ရ
ရခိုင်ရှိ မွတ်စလင်များ ကလေးနှစ်ယောက်သာ ယူရေး ဦးခင်ရီ ထောက်ခံ
9 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Mya Nu Thar November 9, 2012 - 4:05 pm	Why to Rakhine? Do these muslims belong to Rakhine? Rakhine state should not be discriminated to receive these illegal migrant Bengalis. Let those sympathetic nations receive them on their land.
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 10, 2012 - 3:30 am	၎င်း ၇၈ ဦးသည် ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်၊ မြောက်ဦးနှင့် စစ်တွေဒေသတို့မှ ထွက်ပြေးလာကြသူများ ဖြစ်ကြောင်း။
Mya Nu Thar: It clearly stated in news that they fled from Rakhine State, Kyauk-taw, Myauk-oo and Sittwe area. That is why sending back to Rakhine and if they have no legal paper, they may end up going back to Bangladesh or in camp. This act is not discriminating of sending them to Rakhine. But I agreed with you that they sneak into Rakhine State and crossed over Burma inland to go to Malaysia, so they shound be sent to Malaysia or other sympathetic nations, such as Saudi or Kuwait. They have many vacant land and the same religion.
Reply	Si November 9, 2012 - 4:20 pm	If Bangalies want to go to Malaysia, let them go. It is win,win situation for both( Rakhins and Bangalies) side.Don’t be naive,be smart.
Reply	Myant Linn November 9, 2012 - 10:01 pm	အဲဒီ ဘင်္ဂလီနွယ်ဖွား လူမျုိးတွေဟာ တကယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားတယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသမှာမဆို လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်ခွင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်။ ရခိုပြည်ကလာတယ် ဆိုပြီး ရခုိုင်ပြည်ကို ပြန်ပို့တာကတော့ နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်ရာနှင့်၊ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုတာ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မျက်ကွယ်ပြုရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။ အခုလိုပြန်ပို့တာဟာ သူများထမ်းထားရတဲ့ ၀န်ကိုကျတော့ လေးမှန်းကိုမသိ ကိုယ်တိုင်ဝန်ကို ထမ်းလာရတော့မှ လေးမှန်းသိတယ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်မနေဘူးလား။
Reply	မျိုးဆက် November 16, 2012 - 2:30 pm	အဲဒီ ဘင်္ဂလီနွယ်ဖွား လူမျုိးတွေဟာ တကယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားတယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသမှာမဆို လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်ခွင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်။ ရခိုပြည်ကလာတယ် ဆိုပြီး ရခုိုင်ပြည်ကို ပြန်ပို့တာကတော့ နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်ရာနှင့်၊ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုတာ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မျက်ကွယ်ပြုရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။ အခုလိုပြန်ပို့တာဟာ သူများထမ်းထားရတဲ့ ၀န်ကိုကျတော့ လေးမှန်းကိုမသိ ကိုယ်တိုင်ဝန်ကို ထမ်းလာရတော့မှ လေးမှန်းသိတယ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်မနေဘူးလား။
Reply	Si November 10, 2012 - 5:19 am	If Banglies want to go Malaysia, let them go. It is win win situation for Rakhines and Bangalies. Don,t be naive, be smart.
Reply	ဇော်အောင် November 10, 2012 - 10:50 pm	အစိုးရ အဆက်ဆက် က ဖိနှိပ် လာတာခံခဲ့ ရတာလဲ ကျေပြီ….အဲလူထု ကလည်း အမျိုးသား ရေး စိတ်ဓါတ် နဲ့ဆက်ဖိချင်…(မြန်မာပြည်ရှိ အမျိုးသားရေးဝါဒ မျိုးချစ်စိတ်ဆို သည် မှာ…လူမျိုးခြားများ အား မုန်းတီးခြင်းဟု နားလည်မိသည် ).သြော် ဘန်ဂါလီ…..ဘာလို့ များလူလောကထဲလာခဲ့ရတာလဲ……
Reply	kyawnaing November 13, 2012 - 7:07 am	မြန်မာပြည်ထဲမှာလူမျိုးပေါင်းစုံနေကြတာဘဲ။
Reply	timothy November 12, 2012 - 12:01 am	What is this Describe? There are no human rights in Burma for Muslim people. They have no where to go even in inside Burma. What is the law? Where is the law? So many rakhine buddhist(Bengladesh citizen) move to rakhine and get citizenship. Why? Rakhine are very pity and honest people .They don’t understand Bamar wicket program. Bamar took all resources from Rakhine but left poverty and hater-ism between rakhine and muslim people.